STK ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA - Tononkira Malagasy - serasera.org
STK ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA
Nampiditra : vanina
Tamin'ny : 11/03/2005 13:06:51
STK : Sampana Tanora Kristianina ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA dia sampana velona , mijoro ao amin'ny FJKM ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA. Miisa eo amin'ny 100mahery eo ny mpikambana amin'izao , ary eo amin'ny 14 no miakatra eo. Misy ny tanora zokiny izay atao hoe MAINTIMOLALY izay mandray anjara amin'ny fotoana. Ny volana Oktobra no isan-keritaonan'ny sampana ary mankalaza izany isan-taona izy ireo. Matetika no manasa vahiny , mpihira zokiny izy ireo amin'izany.Misy sehatr'asa maro ao amin'ny sampana, misy ny sehatra mpanao tantara, mpihira, mpikabary, fanatanjahan-tena, mpapihaingo(decoration),mandihy,fiteny vahiny(anglais, francais)... Azo asaina ny sampana, afaka mivahiny na hira na tantara,...., ary afaka manao ireo miaraka. Manana mpanoratra tantara ny sampana, ary miara miasa amin'ny mpanoratra hira maro toy Bessa, .... Efa namokatra horonan-tsary gasy ny sampana mitondra ny lohateny hoe:"MANJAKA JESOA", izay horonan-tsary nalefa tao amin'ny televisiom-pirenena. Maro tamin'ny mpikambana no efa mana-talenta , toy ny mandihy , mihira, mpikambary. "Ho vavolombeloko ianareo ", izay no teny fanevan'ny sampana satri mijoro ho vavolombelon'i Kristy hatrany , na amin'ny asa, na fiteny, na fitondrantena. Mandeha mivoaka ny faritra Antananarivo isan-taona ny sampana, mitory ny filazantsara. Anisan'ny toerana efa notsidihiny :Manalalondo, Manja(Toliary), Ambila , Ambatondrazaka, ..., ary mikasa ny ho any Mananjary amin'ity taona ity.
Afaka mifandray aminy mivantana amin'ny alalan'ny mailaka stkanosivavaka@yahoo.fr , na antaratasy amin'ny adiresy STK ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA FJKM ANOSIVAVAKA ANTANANARIVO 101. Misaotra ano mankasitraka ny Sampana.
Akory ny talentanao?
he ry mpanota
HIANAREO NO FAHAZAVANA
INTY AHO IRAHO AHO
vanina (11/03/2005 18:06:51)